Chivabvu 18, 2018 arun
Unionbank muna Philippines showcases Bitcoin midziyo mugodhi
Bitcoin anopfuurira atambudzwe mari nemasangano. Kudeuka bhangi kuPhilippines, Unionbank, chaauya midziyo yayo Bitcoin kuchera panguva bhizimisi musangano.
Ichi chinoratidza rokutanga pamahombekombe guru pachena Mining Bitcoin.
India kuti Infosys ishamwari nemabhangi kuti blockchain-inobva tengeserana mari Network
Infosys ari kudzidza blockchain Michina kuunza efficiencies zvitsva kuchinjanisa mari.
The blockchain-inobva kutengeserana Network rakagadzirirwa digitize kutengeserana mari pezvakaitwa zvebhizimisi uye Anofukidza dzakadaro se uridzi chivimbo chakasimba, advertising magwaro uye kubhadhara.
kuenda mberi, boka ndehwokuti kuumba “nzwisisika blockchain mararamiro, zvobatsira akananga zvikuru kuitwa zvigadzirwa ichi,” akati Ajay Gupta, mukuru mukuru maneja pa ICICI Bank.
Tel-Aviv Stock Exchange kushandisa blockchain itsva anomukweretesa papuratifomu
The Tel Aviv Stock Exchange ari teaming pamwe Accenture uye The Floor, chinhu Israeli fintech nomusimboti, kuvaka blockchain kuchengetedzeka anomukweretesa papuratifomu kunangidzirwa kubvumira zvakananga anomukweretesa zviridzwa zvose zvemari.
Kuchikuva achaita somunhu “mumwe-chichiita-chitoro vose kuchengetedzeka anomukweretesa mabasa, kubvumira kuwana kurei kuchengetedzeka eThe mukati pfupi nguva-mapuranga, kunyange uchishanda mapfupi-rokuti zvinzvimbo,” mumwe mupepanhau inoti.
Previous Post:Sei munhu kufanotaura maitiro mwero mumwe cryptocurrency tichitarisa uwandu mirairo akaisa?